गर्मीमा अनुहारबाट किन निस्कन्छ चिल्लोपना? सनस्क्रिन कस्तो लगाउने? - Bidur Khabar
गर्मीमा अनुहारबाट किन निस्कन्छ चिल्लोपना? सनस्क्रिन कस्तो लगाउने?
विदुर खबर २०७६ असार १२ गते १:४०
प्रश्न : गर्मीमा अनुहारबाट किन निस्कन्छ चिल्लोपना? सनस्क्रिन कस्तो लगाउने? – एस
डा सोनिया गुप्ताको उत्तर : यतिखेर कडा घाम लाग्छ। थौरै घाममा निस्कँदा पनि अनुहारको छाला डढ्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले सक्दो घाममा ननिस्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लाग्छ। तर, घाममा ननिस्किएर दैनिकी चल्दैन। चिसो मौसममा भन्दा गर्मीमा छालामा देखिने समस्या फरक हुन्छन्। गर्मीमा छाला कालो हुने मात्रै होइन, चायाँपोतो आउने र अनुहारमा कालो धब्बा बस्ने समस्या हुन सक्छ। छालामा चिल्लोपना बढी देखिन्छ। यो मौसमका कारण हुने नियमित प्रक्रिया भए पनि धेरैलाई समस्या लाग्छ।
सनस्क्रिन कस्तो लगाउने?
सूर्यबाट निस्किने अल्ट्राभायोलेट किरणले स्किनमा हुने मेलेनिन बनाउन सेललाई नोक्सान पु¥याउँछ। स्किन क्यान्सर यसको सबभन्दा ठूलो असर हो। सूर्यबाट दुई प्रकारका अल्ट्राभायलेट किरण धर्तीसम्म पुग्छन्, युभिए र युभिबी। युभिबीलाई सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर (एसपिएफ)ले रोक्न सक्छ। यसको अधिक मात्राले युभिबी किरण रोक्न सहयोग गर्छ।
जब राम्रो सनस्क्रिनका बारेमा सोचिन्छ त अक्सर अधिक एसपिएफ रहेको क्रिममा आँखा रोकिन्छ। एसपिएफले युभिबी किरणलाई रोक्छ तर युभिएले स्किनलाई वास्तवमै नोक्सान पु¥याउँछ। एसपिएफसँगै सनस्क्रिनमा युभिएको कम्बिनेसन पनि जरुरी छ। त्यसैगरी जिंक अक्साइड, टाइटेनियम डाइअक्साइड, एक्मसुले र अक्सिबेजान पनि हुन जरुरी छ। युभिए र युभिबी दुइटै सही सनस्क्रिन हुन् तर यी एसपिफमा निर्भर हुन्छन्।
कसरी लगाउने सनस्क्रिन?